Raha manam-bola kely, dia lokoy ny trano, ataovy loko hafa tian'ny sainao sy ny ankohonanao.Na sograsy asiana teinte kely fotsiny aza, asiana sira sy vovoka ciment kely tsy anaraka, dia efa mety, tsy lafo ireny, kofafa no tapahana ny tahony andokoana azy, na atin-trano na ivelany.
Raha afaka miova asa, na miova toeram-ponenana, eny na hifindra faritany mihitsy aza, dia mety ihany koa.
Esory an-tsaina ilay ahiahy hoe, efa nahazatra ireo mpiara-miasa sy ny patron n'ny orinasa, efa nahazatra ilay trano sy tompon-trano, efa nahazatra ny bus mandeha any, efa mahazatra ireo mpiara-monina manodidina, ny sekoly ianaran'ny ankizy atao ahoana indray, ny ankizy efa zatra ireo namany, dia hisaraka amin'ny sipany ve ny tovovavy na tovolahy ao an-trano raha hifindra lavitra. Sao tsy tia vahiny ilay toerana aleha.
Fanontaniana mampisafotofoto avokoa izany. Mila miresaka tsara ny mpivady, mila resahina tsara ny ankizy, na dia zaza madinika aza izy, indrindra ireo tanora ao an-trano. Azo antoka fa mety tsy hanaiky mora ny tanora satria manana ireo namany sy sekoly nianarany izy, nefa toa ireny mifindra kilasy ireny ihany io, misy ny fisarahana ary misy ny dingana hafa hirosoana.
Raha nisy fahoriana nitranga, dia ampirimo ireo sary fahatsiarovana rehetra, indrindra ireo sary nandritra ny fahoriana sy fandevenana. Tsy mora ny mampionon-tena, fa fiainana avokoa izany, "la vie continue".
Masahia manakatona ny lasa, na dia tsy ho adinoana aza izany, hisokafan'ny varavarana vaovao. Satria ny sainao mandinika lava ny lasa, dia tsy ho hitanao ny varavarana na opportunité efa mitranga eo ambany masonao.
Ho an'ny mpino an'Andriamanitra, io ilay fahafatesana, tsy mijanona hatreo, fa misy ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy voatery vatana maty eto izany, fa misy fiainanao sy fahazarana teo aminao alevina, dia hisy fiainam-baovao hafa indray hanohy izay fiainana teo aloha izay, tsy maintsy ho tsara kokoa iny, satria ny traikefanao tany aloha tsy ho adinonao, fa hanampy ny zava-baovao hitanao indray.
Tsy ho avy hatrany dia tsara ilay vaovao, aza miverin-dàlana anefa, fa akatony indray iny varavarana iny raha tena ratsy, dia sokafy indray ny varavarana manaraka.